Ihe kpatara ihe omuma banyere ihe bu ihe zuru oke na ahia ahia | Martech Zone
Afọ gara aga bụ akara ọkọlọtọ maka nke anyị Mmemme ozi ụlọ ọrụ. Echeghị m na e nwere otu izu na-aga na anyị enweghị ọnụ ọgụgụ dị nta na mmepụta maka ndị ahịa anyị. Oge obula anyi huru nghari na oru onye ahia anyi, anyi na ebido nyocha ihe banyere ihe omuma ha ozo. (Kpọtụrụ anyị maka a see okwu!)
Ọtụtụ mgbe anyị jikọta atụmatụ ndị ahụ na-acha ọcha, microsites mmekọrịta na mkpọsa nkwado ndị ọzọ - mana enweghị obi abụọ na leverage na-akwalite infographics abụrụla ihe kachasị mkpa maka ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa anyị. Ihe omuma ihe omuma a site na Digital Marketing Philippines bu ezigbo nchikota nke ihe mere ha ji aru oru nke oma.
Ihe omuma ihe bu usoro ohuru iji gbanwee ozi ederede nkịtị (nke ahụ abụghị ịsị na ọdịnaya ederede na-agwụ ike ma ọ bụ na ọ baghị uru) n'ụzọ dị mma ma na-adọrọ adọrọ karị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeziwanye nsonaazụ ahịa ọdịnaya gị, ihe ndị a dabere na nke a ọdịnaya ndị bipụtara na mbụ ga - egosi gị ihe kpatara data 10 kpatara ị ga - eji jiri ma jikọta Infographics na mgbasa ozi ahịa ọdịnaya gị ugbu a:
Tags: mara amarajide ucheEmbeddịkwuo ika mmatadịkwuo na-eso ụzọinfographicinfographic ọdịnaya ahịaoberenhaziChọọ MarketingAkwere nghọtamalitere ịrịa